God ha qodin hadad qodona ha dheerayn ku dhici doontaana mooyeee.
Tariikhdu waxay ahayd Oct 25, 2017 malintii saddexaad ee ololaha doorashada xisbiga kulmiye .
Waxan safar ugu baxnay degaanada waraabeeye iyo degaano kale oo tiro badan, aminta ama goor sheegtu waa abara 11: 30 maalinimo .
Safarka waxa hoggaaminaya guddoomiyaha gobolka togdheer ee waqtigaasi oo ahaa maxamuud cali saleeban Ramaax. Waxa nala saarnaa gaadhiga ilaaladiisa khaaska ah oo ahaa hal askari daleewarkiisa oo markaas ahaa nin ay isku hayb yihiin iyo aniga oo ahaa weriyihii wax ka soo duubayey waqtigaasi .
Ujeedka safarkan ayaa ahaa sidii xisbiga kulmiye mar labaad u hanan lahaa shacbi waynaha Somaliland gaar ahaan degaanada markaasi aanu maraynay isagoo guddoomiye ramaax ku jiray olole lixaad leh isla markaasna ku fanayey degaanadaasi oo uu dhalasho ahaan ka soo jeeday .
Waxa aan xasuusta hadaladii uu ku hadlayey waqtigaasi oo ahaa mid cadifadaysan isla markaasina uu ka muuqday rabitaan gaar ah ama rabitaan shaqsi .kelmadaha layaabka igu noqday ee aaan wali maskaxdayda ka bixin waxa ka mid ah inuu yidhi marka xisbiga kulmiye guulaysto waxan doonayaa in aan maamulo mashariic fara badan oo gobolka saaxil ah waxana markaasiba ii muuqatay in aanu xisbiga kula socon mabda iyo u danaynta shacbiga somaliland ee uu wato dano shaqsiya iyo ujeedooyin u gaar ah.
Maxamuud cali saleeban Ramaax waxa uu dagaal siyaaasadeed la galay xisbiyada ucid iyo waddani oo markaasi loolan adagi ka dhexeeyey xisbiga kulmiye isagoona aadan moodaynba inuu loolanka kula jiro muwadiniin Somaliland ah oo xaq u leh hanashada kursiga ugu sareeye dalka .
Anigu ka ayaanle ahaan waxa indhaha ku hayey waqtigaasi intii ka danbaysay xilka loo dhiibi doono ramaax .isagoona waqti bilo ah ka dib loo magacaaabay gobolka gabiilay .
Mudo kadib waxa laga xayuubiyey xilkii madaxwayne muuse u dhiibay ee ahaa guddoomiyaha gobolka gabiilay. Waxana uu markiiba bilaabay mucaaridnimo adag .
Intaasi kadib ololihiisii reraysnaa waxa uu ku soo af go’ ay xabsi iyo xoriyad la aan uu ku jiiifo xabsiga wayn ee hargaysa .
FG: dhaxalka qoraalkaygan
1 waligaa haku talax tegin qof ama koox aad isaga soo horeedaan siyaasad ama mabaadii gaar ah .
2 ilaalinta mabaadiiida guud iyo wada noolanshaha bulshada waa mid mudan in aan laga horaysiin dan gaar ah
Waxa Qoray Ayaanle Cabdilahi (Ayaanle Calaaliye)